Meydka duqii magaalada Muqdisho oo Axadda berri la keenayo iyo Wararkii ugu dambeeyay.. | HalQaran.com
Meydka duqii magaalada Muqdisho oo Axadda berri la keenayo iyo Wararkii ugu dambeeyay..
Muqdisho (Halqaran.com) – Sida qorshaha uu ahaa meydka Yariisow ayaa Sabtidii maanta la keeni lahaa Magaaladda Muqdisho si aas qaran loogu sameeyo, waxaana garoonka diyaaradaha ku sugnaa mas’uuliyiin ka tirsan Dowladda Soomaaliya iyo xubno kale.
Magaalada Muqdisho ayaa maanta si weyn looga diyaargarowbay in aas qaran loogu sameeyo Gudoomiyihi Maamulka Gobolka Banaadir & Duqii Muqdisho, C/raxmaan Cumar Cismaan (Yariisow), oo u geeriyooday dhaawacii 24-kii bishii July ka soo gaaray qaraxii ka dhacay Xarunta Gobolka Banaadir.
Guddiga qabanqaabada aaska ayaa warbaahinta u sheegay in la keenayo berri oo ah maalinimo Axad ah, islamarkaana aas qaran loo sameyn doono Guddoomiye Yariisow.
Illaa iyo hadda lama oga sababta keentay dib u dhaca meydka marxuum Cabdiraxmaan Cumar Yariisow guddoomiyihii hore ee maamulka gobolka Banaadir.
Meydka duqii Muqdisho
oo berri la keeni doona